Kudlwengulwe kwashiswa intombazane eNdiya | isiZulu
Kudlwengulwe kwashiswa intombazane eNdiya
Kudlwengulwe owesifazane emkhulekweni
Izibalo ezethusayo ngamantombazane adlwenguliwe
Kudlwengulwe intatheli eNdiya
New Delhi - Intombazane yaseNdiya yadlwengulwa yiqulu labafana ezehlakalweni ezimbili, yashona ngemuva kokuba yokhelwe ngomlilo, nokuyinto esuse imibhikisho empumalanga yedolobha laseKolkata, kusho amaphoyisa ngoLwesine.
Intombazane eneminyaka engu-16 ubudala yaqale yadlwengulwa ngo-Okthoba 26 yaphindwa futhi nangosuku olulandelayo idlwengula ngabafana ababengaphezulu kwabayisithupha ngakubo edolobheni laseMadhyagram, ngaphandle kwaseKolkata.
Yaphinde yadlwengulwa okwesibili iphuma esiteshini samaphoyisa ukuyobika isigameko sokuqala.
Yabe isishiswa ngomlilo ngoDisemba 23 yashonela esibhedlela ngosuku olwandulela unyaka omusha, kusho amaphoyisa.
"Ngaphambi kokuba ashone watshela izikhulu zezempilo ukuthi washiswa ngoDisemba 23 abalisa ababili abasondelene nabasolwa abamdlwengula," kusho uNimbala Santosh Uttamrao okhulumela amaphoyisa etshela abe-AFP.
Amaphoyisa aze abopha abasolwa ngoLwesithathu, ngemuva kwezinyanga ezimbili kwabikwa isigameko sokuqala, kusho isikhulu samaphoyisa endawo uRajiv Kumar etshela abe-AFP.
Usesitokisini umama wengane eyabonakala ibhema 'insangu' kwi-video, kuFacebook
Emizuzwini eyi-27 edlule
Ezinye izindaba... Umhlaba...
Ukhalelwe ngamasongo kaSigonyela owesifazane oneminyaka engu-20 ubudala ngemuva kokuzungeza kwe-video etshengisa ingane yakhe ibhema insangu ezinkundleni zokuxhumana.
Kushone abantu abangu-18 abebephuma eholidini kwehla ingozi yebhasi
Kushone okungenani abantu abangu-18 kwathi abanye abaningi balimala ngesikhathi ibhasi abebehamba ngalo enyakatho-mpumalanga yeThailand liphaphalaza liphuma emgwaqeni lase lishayisa isihlahla, kusho izikhulu.
Ishonile intombazane, 13, edutshulwe wumfowabo, 9, kubangwa i-video game
Ishonile intombazane, 13, yaseMississippi ngemuva kokudutshulwa wumfowabo oneminyaka engu-9 ubudala kubangwa i-video game.
ISITHOMBE: USophie Ndaba ngosuku lomshado wakhe wesintu
Kuxwayiswa ngeqhinga elisha lamasela lokweba impahla emizini yabantu
Usizi umbani ubhubhisa umndeni e-KZN
IZITHOMBE: Mukhulu umonakalo odalwe yimvula eGoli
Cpt: 16-19°C Pta: 16-23°C
Jhb: 12-21°C Bloem: 13-24°C
Dbn: 17-31°C PE: 18-22°C
Van Reenens Pass - 18:21:32 PM CRASH RECOVERY near Van Reenens Pass - EXPECT DELAYS Ezinye zasemigwaqeni